Ibhedi yaseBougainVilla kunye nesidlo sakusasa-iJade (GF) - I-Airbnb
Ibhedi yaseBougainVilla kunye nesidlo sakusasa-iJade (GF)
Igumbi lakho lokulala e indlu enevaranda sinombuki zindwendwe onguParvathi
IBougainVilla yindawo yoxolo, ejikelezwe ziintyatyambo unyaka wonke - ilungele impelaveki eyonqenayo okanye ukuphumla emva kosuku lomsebenzi oluxakekileyo. Inamagumbi atofotofo, iigadi ezintle, ukutya okuphekwe ekhaya kunye nobumfihlo obupheleleyo xa uyifuna, iVilla yethu yindawo ekhuselekileyo yomntu wonke. Ibekwe phakathi kweNew Delhi kunye neAgra, iVilla sisiseko esihle kakhulu sokuhlola iimarike zakudala zaseDelhi okanye uthathe uhambo olukhawulezayo losuku ukuya eTaj Mahal. Yiza usele i-chai eshushu, ungqongwe ziintaka ezintyilozayo!
Isusiwe kwingxolo kunye nokuphithizela kweNew Delhi, iBougainVilla yipropathi entle enegadi ezichumileyo kunye nomoya ozolileyo obekwe kwisixeko saseFaridabad kuMmandla weSizwe. Iikhilomitha ezingama-25 kuphela (iikhilomitha ezili-16) emazantsi eDelhi, kwaye ibekwe kufutshane nesikhululo semetro, iVilla yethu isisiseko esigqibeleleyo sokucwangcisa uhambo kunye nohambo lokuthenga eNew Delhi. Abahambi bezoshishino kunye nokuzibandakanya eSouth Delhi (iindawo ezifana ne-Okhla, Jasola, kunye neNehru Place) baya kufumana indawo yethu elula.
I-BougainVilla ifumaneka ngaphandle kohola wendlela odibanisa iDelhi kunye ne-Agra - isixeko saseTaj Mahal - okwenza kube lula ukucwangcisa uhambo lweentsuku.Unokonga ngaphezu kweyure lexesha lokuqhuba xa undwendwela iTaj ukusuka kwi-Villa yethu.
Nokuba uhamba ngeshishini okanye ukuzonwabisa, ungaphinda utshaje kwakhona eBougainVilla njengoko urhabula i-chai eshushu (okanye ikofu) kwiigadi zethu okanye kumathafa. Thatha incwadi kwingqokelela yethu enkulu ukuze uphumle. Ziphathe ngokutya okumnandi nokunempilo kwamaNdiya. Sijonge ukunamkela kwikhaya lethu!
Isikhululo seenqwelomoya saseNew Delhi's Indira Gandhi International kunye nesikhululo sikaloliwe sokuhamba kunye nokuhla kunokulungiswa ngemoto eqhutywa ngumqhubi.
Imoto eqhutywa ngumqhubi kunye nezikhokelo ezithetha isiNgesi nazo zinokulungiswa ukuze zibonwe kwindawo yaseDelhi kunye nohambo oluya eTaj Mahal nakwezinye iindawo ezikufutshane.
-Ipropathi yelifa eyilwe ngokungcamla enoyilo olwahlukileyo oluvela kumazantsi eTamilnadu.
-Amagumbi eendwendwe aneA/C, ihitha, kunye neeyure ezingama-24 ezibaleka amanzi ashushu.
- Ukufikelela kwiiterras kunye neegadi ezihonjiswe kakuhle.
- IJade: Ulala ezimbini. Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kwiveranda, enejingi yemveli yaseIndiya.
- IRuby: Ulala ezimbini. Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kwi-terrace yangasese.
- I-Opal: Iyakwazi ukuhlalisa iindwendwe ezintathu. Igumbi linegumbi le-ante elincanyathiselwe kunye nedesika kunye nebhedi yosuku.
- California King Size ibhedi
-A / C (ukongeza abalandeli, kunye neefestile ezinkulu)
-Igumbi lokuhlambela elincanyathiselweyo labucala elinelinen entsha kunye ne-Ayurvedic Organic toiletries
- Idesika yokubhalela, ifriji, iti yangaphakathi kunye nekofu
-Ukufikelela kwi-intanethi ye-Wi-Fi
Iindwendwe zingonwabela isidlo sakusasa esinescombululo, esifumaneka ngo-7:30am ukuya ngo-9:30am kwigumbi lokuphumla.
Isidlo sakusasa esiqhelekileyo sibandakanya iziqhamo ezitsha zonyaka, i-muesli, iyogathi yasekhaya, ubisi, amaqanda (ukuodola), i-hash browns, i-toast, isitya esimnandi saseIndiya, ijusi, kunye neti kunye nekofu.
Iindwendwe zisenokukhetha ukukulungiselela isidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa ukuba ziyathanda, ngentlawulo eyongezelelweyo. Siphakela ukutya okuphekwe ekhaya eMantla naseMazantsi eIndiya (okutya imifuno nokungatyani).
Umamkeli wakho unobubele, unobubele kwaye uluncedo. Uhambe kakhulu eIndiya nakumazwe amaninzi kwihlabathi liphela kwaye ubaqonda kakuhle usizi lomhambi wamazwe ngamazwe odiniweyo. Uya kukulungela ukukucebisa ngeendlela ezahlukeneyo zokuhamba elizweni, ukubona indawo kunye nokuthenga.
Lilonke - uya kugutyungelwa kukuthuthuzela kunye nokhathalelo lwekhaya.
Ukufika / Ukuhamba: Iindwendwe zamkelekile ukuba zifike nangaliphi na ixesha emva kwe-2 PM kwaye zihambe nge-11 am. Ukuba ufika emva kwe-6 PM, nceda usazise kwangaphambili. Ukutshaya kuvunyelwe kuphela kwiindawo ezimbalwa ezikhethiweyo ezivulekileyo.
Izilwanyana zasekhaya: Siyazisola ngokuba asikwazi ukwamkela izilwanyana zasekhaya.
Iivenkile ezithengisa ukutya, iimfuno zemihla ngemihla, Amayeza akude ngemizuzu kwaye kumgama wokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Parvathi